Praiminisitra Mahafaly Olivier : “Nandresy ny demokrasia teny Tsimbazaza” -
AccueilRaharaham-pirenenaPraiminisitra Mahafaly Olivier : “Nandresy ny demokrasia teny Tsimbazaza”
Praiminisitra Mahafaly Olivier : “Nandresy ny demokrasia teny Tsimbazaza”
04/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nitondra ny heviny mahakasika ny fahalanian’ireo volavolan-dalàna telo fehizoro momba ny fifidianana ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier, omaly. Tamin’izany indrindra no nanambarany fa nandresy ny demokrasia tamin’ny fandanian’ireo solombavambahoaka ny lalàm-pifidianana. Eny, fa na nisy fanakorontanana nataon’ireo depiote mivondrona ao amin’ny antoko Tim sy Mapar aza ka tsy nanatrehany izany fandaniana izany, dia nilaza ny praiminisitra fa fandresena lehibe ahafahana miroso amin’ny fifidianana izany. “Misy tamin’ireo depiote ireo anie nanatrika teo ihany saingy nivoaka izy ireo nony avy eo. Zon’izy ireo tanteraka anefa izany. Ny zava-dehibe fotsiny ihany dia ny fahalanian’ireo volavolan-dalàna miisa telo ireo. Tsy lany fotsiny amin’izao anefa fa lanin’ny maro an’isa izany. Noho izany, mandresy ny demokrasia satria io no lalàn’ny maro an’isa mitondra sy ahafahana miroso amin’ny fifidianana, izay himatimatesan’ny rehetra”, hoy ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier.
Ankoatra izay, notsindriany fa tsy maintsy tanteraka amin’ity taona 2018 ity ny fifidianana Filoham-pirenena. “Efa lany ireo volavolan-dalàna ireo, ary mbola alefa hasiam-panitsiana sy holaniana eny amin’ny Antenimieran-doholona indray izany. Raha resy lahatra izy ireo na mitovy ny tadin-dokanga amin’ny eny amin’ny Antenimieram-pirenena, azy ireo izany”, hoy hatrany ny praiminisitra.
Voalaza ihany koa fa ny fijerena ny mahasoa hatrany ny firenena no tokony ho katsahin’ny rehetra fa tsy ny hampiteraka korontana lava eto amin’ny firenena. “Ny tombontsoa ambonin’ny firenena hatrany no katsahin’ny Fitondrana. Tanjona iray no iraisantsika dia ny firosoana amin’ny fifidianana ao anatin’ny fitoniana sy fangaraharahana tanteraka”, hoy izy.
Etsy andaniny, raha ny mahakasika ilay 90 andro fiantsoana ny mpifidy indray, nambaran’ny praiminisitra fa tratra ny fanatanterahana izany, ary tsy misy tokony hatahorana. Voalaza fa ny didy hitsivolana avoakan’ny governemanta miantso ny mpifidy dia manan-kery hatrany fa miankina amin’ny datim-pifidianana avoakan’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana izany.
Kidnapping : Karohina fatratra ireto olona ireto
Araka ny efa nambara tamin’ny gazety Triatra omaly alarobia 07 jona 2017 dia karohina fatratra mihitsy ireto olona ireto, jiolahy mitam-piadiana mampidi-doza fantatra amin’ny anarana hoe Ranaivoson Augustin na Sôla na Tonton na koa Razoky, ...Tohiny
Filoha Hery Rajaonarimampianina : Nanome fanampiana ho an’Ambohitsilaozana
Grevin’ny UCTU : Tokony hotohizany mandritra ny herintaona
Andry Rajoelina / Marc Ravalomanana : Air Force One II, villa Elisabeth, Daewoo, Soalala…
Fifandraisana amin’ i Sina : Tonga omaly ny vary fanampiana milanja 2.100 taonina